Argagixisanimadu waxay sababeysaa in Mareykanku uu soo saaro la-talin xagga safarka ah oo uu ku tagayo Algeria
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Argagixisanimadu waxay sababeysaa in Mareykanku uu soo saaro la-talin xagga safarka ah oo uu ku tagayo Algeria
Aljeeriya News • Jebinta Wararka Safarka • Crime • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Websaydhada dawladda Mareykanku waxay uga digeysaa socotada in ay taxaddar dheeraad ah muujiyaan markay u safrayaan Aljeeriya argagixisada awgeed
Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa maanta soo saartay la-talin socdaal oo ku aaddan Algeria argagaxiso darteed. Website-ka dowladda ayaa uga digaya dadka socotada ah inay taxaddar dheeri ah muujiyaan markay u safrayaan Algeria argagaxiso darteed. Meelaha qaarkood waxay kordhiyeen halista.
La talinta ayaa ku talinaysa inaadan u safrin:
- Meelaha u dhow xuduudaha bariga iyo koonfurta argagixisada awgood.
- Aagagga Saxaraha Saxaraha argagixiso darteed.
- Kooxaha argagixisada ayaa sii wada qorsheynta weerarada suurtagalka ah ee Algeria. Argagixisada ayaa dhici karta inay ku weeraraan digniin yar ama aan lahayn waxayna dhawaanahan bartilmaameedsanayeen ciidamada amaanka ee Algeria. Weerarada badankood waxay ka dhacaan dhulka miyiga ah, laakiin weerarada waa suurta gal in laga sameeyo magaalooyinka inkastoo booliis badan oo firfircoon joogaan.
Dowladda Mareykanka waxay leedahay awood xadidan oo ay ku bixiso adeegyada deg degga ah muwaadiniinta Mareykanka ee ka baxsan gobolka Algiers sababo la xiriira xayiraadaha ay dowladda Aljeeriya saartay safarka shaqaalaha dowladda Mareykanka.
Akhriso qaybta Badbaadada iyo Amniga ee ku taal bogga macluumaadka dalka.
La talinta safarku waxay sii socotaa inay uga digto dadka safarka ah haddii ay go'aansadaan inay booqdaan Algeria:
- La socodsii booliska deegaanka markaad booqaneyso meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn.
- Safar xagga hawada ah haddii ay suuragal tahay; ku sii jir waddooyinka waaweyn haddii ay tahay inaad ku safarto wado.
- La soco safarada sumcadda leh ee aagga yaqaan.
- Ka fogow inaad ku hoydaan meel ka baxsan magaalooyinka waaweyn iyo goobaha dalxiiska.
- Isqor Barnaamijka Diiwaangelinta Socdaalka Smart (STEP) inaad heshid ogeysiisyo oo kuu fududeyso helitaankaaga xaalad degdeg ah.
- Raac Wasaaradda Arrimaha Dibadda on Facebook iyo Twitter.
- Dib u eeg Warbixinta Dembiyada iyo Amniga loogu talagalay Algeria.
- Muwaadiniinta Mareykanka ee dibedda u safraya waa inay had iyo jeer yeeshaan qorshe deg deg ah oo loogu talagalay xaaladaha degdegga ah. Dib u eeg Liiska Hubinta ee Socdaalka.
Xuduudaha bariga iyo koonfurta
Ka fogow u safridda dhulka miyiga ah ee 50 km (31 mayl) u jira xuduudda Tuunis iyo 250 km (155 mayl) xudduudaha Libya, Niger, Mali, iyo Mauritania sababo la xiriira falal argagixiso iyo fal dambiyeed.
Safarka dhulka fog ee loo maro Saxaraha Saxaraha
Argagixisada iyo kooxaha dambiilayaasha ah ayaa ka hawlgala qaybo ka mid ah Saxaraha Saxaraha. Markaad u safreyso Saxaraha, waxaan si weyn kugula talineynaa inaad ku safarto oo keliya diyaarad oo aadan ku safrin dhulka.
Booqo websaydhka dawladda Mareykanka ee loogu talagalay Socotada Khatarta Sare leh.
Nigerian Ibom Air ayaa iibsatay toban diyaaradood oo Airbus A220 cusub ah
Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay Bali, ayaa dilay 3 qof iyo ...
Pfizer-BioNTech COVID-19 Tallaalka loo ogolaaday carruurta...
Ilaalin guri ma laha? Ma jiraan adeegyo? Samee safarka mar kale weyn!
Great Britain waxay diyaar u tahay kobcinta dalxiiska sanadka 2022
Bayaanka cusub ee Glasgow ee ku saabsan Talaabada Cimilada ee Dalxiiska...
Ilmo-soo-qaadid-is-Maamuleed oo Dawooyin leh Hadda Loo Arkay Ammaan
IATA: Mareykanka oo dib ugu furaya socdaalayaasha la tallaalay ayaa ...
Shirkadda Alaska Airlines ayaa duulimaadyo ka samaysay San Francisco Giants-themed…
Shan sano oo xabsi ah oo Jarmal ah oo lagu helay COVID-19 been abuur ah...
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo gaaray dalka Ghana...
Wax ka qabashada ku habboonaanta Adduunka Cusub ee Socdaalka
WTTC: Sacuudi Carabiya ayaa martigelin doonta shirweynaha 22aad ee caalamiga ah ee soo socda…
Khamrigu Talyaanigu Wax Cusub Ma Jiro: Canab Waa Dhalan
Qabsashada Ruuxa Iceland oo wata Reykjavik cusub...
Waa kee qofka ugu awooda badan dhanka horumarinta...
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Danjirayaasha Hadda ...
Canada ayaa hadda xirtay safarkii ay ku tagi lahayd Koonfur Afrika...
Dalxiisayaasha aan lahayn toogashada xoojinta waxay geli karaan Israel oo keliya...
Burburinta Volcano Hawaii oo Abuurtay Hawo Liidata ...
Shirweynaha Sanadlaha ah ee IATO oo Hadda loo Qabtay Diisambar ...
Martinique ayaa cirka dib ugu furay duullimaadyada Air Canada
Dalxiiska Sacuudi Carabiya oo Hawl Muhiim ah ka leh Talyaaniga
Muuqaal ka dambeeya Muuqaallada La Yaabka leh ee IMEX waara
Toki Air waxay ku biirtay Sabre: Tokyo oo asal ah
Qufulka cusub ee Netherland ee COVID-19 wuxuu noqon doonaa kii ugu horreeyay…
Farshaxanka kala -duwan wuxuu isku daraa Dareenka Fardaha iyo ...
Duulimaadyada New York JFK ee ku socda Lisbon ee TAP Air Portugal hadda
Goobaha Safarka ugu Fiican 2022